Nayakhabar.com: प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको गोवा बसाइमा के होला ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको गोवा बसाइमा के होला ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको गोवामा हुने ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलन’ मा सहभागी हुन १८ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारत गएका छन् ।
शनिबारदेखि नै सुरु हुने सम्मेलनले दुई समूहबिच साझेदारीका क्षेत्र पहिल्याउन महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने आशा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखको बैठक एवम् ब्रिक्स विमस्टेक आउटरिच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको आवश्यकता र हितलाई पूरा गर्नेतर्फ सम्मेलनलाई सदुपयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनअघि आयोजना हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालका खाडीका प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा समेत सहभागी हुनुहुनेछ ।
सार्क क्षेत्रका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई ब्रिक्स सम्मेलनमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी गराइएको हो । दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्का सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्ने र वातावरण परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने, सदस्य राष्ट्रबिच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने, कृषि, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि, पर्यटन एवम् गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने एवम् जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।
रिट्रिट बैठकले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत जारी गर्ने सम्भावना छ । ब्रिक्स ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो भने बिमस्टेक दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रबिच साझा सरोकारका विषय छलफल गर्न खडा गरिएको समूह हो ।
ब्रिक्सले निर्माण, उत्तरदायित्व, समावेशिता, सामूहिकता र समाधानका विषय मुख्य उद्देश्य बनाउँदै पारस्परिक हितका विषयमा सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस वर्षको ब्रिक्स सम्मेलनको नारा ‘जिम्मेवारीपूर्ण निर्माण र समावेशी तथा सामूहिक समाधान’ रहेको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको ब्रिक्स आबद्ध राष्ट्रले अबको ५० वर्षमा विश्वको अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिने अनुमान गरिएको छ । ब्रिक्सको पहिलो सम्मेलन सन्
२००९ र पछिल्लो सम्मेलन सन् २०१५ मा रुसमा भएको थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको लागि मनाउने प्रयास
गोवा बसाइको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्नुहुने छ । भेटमा उहाँले राष्ट्रपति सिलाई चाँडै नै नेपालको भ्रमण गर्नका लागि मनाउने प्रयास गर्नुहुनेछ । सरकारले केही महिना भित्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सिले नेपाल भ्रमण गर्ने विश्वास गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी चिनियाँ राष्ट्रपति सि चाँडै नै नेपाल भ्रमणमा आउनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभएको थियो ।
गोवामा राष्ट्रपति सिलाई नेपाल उहाँको स्वागत गर्न तयार रहेको सन्देश दिने परराष्ट्र मनत्री डा। महतले बताउनुभयो । कम्बोडिया र बंगादेशको भ्रमण सकेर गोवा पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सिसँगको भेट नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सिलाई भटेर नेपाल भ्रमणको निम्तो दिने तयारी छ । दाहाल प्रधानमन्त्री बने लगतै आएको एक चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमण हुने बताएको थियो । तर पछि नेपालको तयारी नभएको भन्दै तत्कालका लागि भ्रमण टरेको थियो । अब भने गोवामा हुने भेटपछि केही महिना भित्रै राष्ट्रपति सि नेपाल भ्रमणमा आउने सरकारको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सिसँग शनिबार बेलुका भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनकै क्रममा प्रधामन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीसँग आइतबार भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ । मोदीसँगको भेटमा दुई देशबिचको सम्बन्ध, आपसी सहयोग र हितका विषयमा छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति जाकोब जुमा, ब्राजिलका राष्ट्रपति मिसेल टेमर र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । भेटमा नेपालको उर्जा उत्पादन, विकास प्रक्रिया तथा राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा रहेको भ्रमण टोलीमा उहाँकी धर्मपत्नी सीता दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा महत, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टङ्कमणि शर्मालगायत हुनुहन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल कात्तिक १ गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ ।